DAAWO Daloolka futada ayay ka barartay ninkeedana wuu ka shakiyay | Gaaloos.com
Home » galmada » DAAWO Daloolka futada ayay ka barartay ninkeedana wuu ka shakiyay
DAAWO Daloolka futada ayay ka barartay ninkeedana wuu ka shakiyay
Nin ayaa wuxuu guursaday gabar, waxay dhiganaysay jaamacad marka uu la aqalgalay waxay sii wadatay waxbarashadeeda, markaas ayuu ka shakiyay inay saaxiibo leedahay, wuxuu yiri aniga waxaan ku noolaa magaalo ka fog meesha ay jaamacadda ka dhigato xaaskayga.
Waxaan kulmi jirnay sitimaankii hal mar, taleefankeeda waxaan ku arkay nambarro oo shaki igu dhaliyay marka aan diray nambarradaas waxaa iga qabtay nin, markaan la hadlay waa igu damiyay aad baan uga shakiyay xaaskayga.
Maalin maalmaha ka mid ah anooiyada toddobaad ka maqan ayaan aaday magaalada ay jaamcadda ka dhiganayso, markaas ayaan arkay iyadoo aad tacbaan u ah oo oynaysa markaan weydiiyay waxay igi tiri boqo dabada ayaa iga bararsan, isla markii dhakhtarad ayaan u kexeeyay.
Marka ay baartay dhakhtaradda waxay igi tiri adiga xaaskaaga futada ayaad ka isticmaashay, waan naxay waxaan ku iri maya, aniga kama isticmaalin, marka aan xaaskayga arintaas weyddiiyay way inkirtay, waxaan ku arkay whats upkeeda sidoo kale wax anana garanaynin.
Title: DAAWO Daloolka futada ayay ka barartay ninkeedana wuu ka shakiyay